Izindaba Zemboni - I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co, Ltd. - Page 1
Khipha ku-internet ubhaka ngo-2021
Njengothandi wezemidlalo ongaphandle, ngincoma le mishini kuwo wonke umuntu!
Ukudoba, ukukhuphuka nokushushuluza kuyimidlalo yangaphandle esiyithandayo. Ngincoma amaphakheji ama-2 wereferensi yakho. Abangane abanezinto zokuzilibazisa bangaxhumana nami!
Kwazi bani ukuthi uyini iqhwa?
Empilweni yansuku zonke, ukuziphathela eyakho isidlo sasemini yisimo wonke umuntu azohlangana naso. Okulandelayo, ngincoma amaphakethe ama-2 e-ice kuwo wonke umuntu.
Ncoma amazinga aphezulu wesikhwama somama aphezulu
Kunezinto eziningi ezimangazayo okufanele uziphathe nengane yakho. Ngalesi sikhathi, isikhwama sikamama esingaphatha izinto ezincane ezahlukahlukene njengamabhodlela ezingane, amanabukeni, amathawula amathe, nezicubu ezimanzi kubaluleke kakhulu.
Kukhona ikhono lokugcina izikhwama zakho ezinegama elikhulu
Izikhwama zesikhumba ezingandile ezifana nesikhumba sengwenya, isikhumba sentshe, isikhumba sesibankwa, njll. Zidinga ukuhlanzwa ebusweni ngethawula elomile, bese zisetshenziswa kancane ngongqimba lwesikhanyisi sesikhumba ukukhulisa ukucwebezela kobuso besikhumba.
Ulwazi lokuthengwa kwemishini: amaqhinga amane wokukhetha ubhaka ongaphandle
Abangane abaningi bezokuvakasha bathi baqale ukujoyina amarenki ngoba babona umuntu ethwele ubhaka omkhulu. Ngemuva kokuthandana kancane ngaphandle, ngithole ukuthi ubhaka ungomunye wemishini ebaluleke kakhulu yezemidlalo yangaphandle. Ubhaka ongaphandle ofanelana nawo awukwazi ukuthuthukisa nje kup......